Roller Bearing Manufacturers , Suppliers - China Roller Bearing Factory
Tapered roller ine 32012/32013/32014/32015/32016/32017/32018/32019
● Tapered roller mabhengi anopatsanurika mabhengi.
● Inogona kuiswa nyore nyore pajenari uye inotakura pedestal.
● Inogona kumira mutoro weaxial mune imwe nzira.Uye inogona kugadzirisa axial displacement ye shaft maererano nechigaro chekutakura mune imwe nzira.
● Single row tapered roller mabhengi anopatsanurika.
● Inogona kumira mutoro weaxial mune imwe nzira.Uye inogona kudzikisira axial kusimuka kweshaft inoenderana nechigaro chekutakura mune imwe nzira.
● Inoshandiswa zvakanyanya mumotokari, migodhi, metallurgy, michina yepurasitiki uye mamwe maindasitiri.
Kaviri Row Tapered Roller Bearings
● Mitsara miviri ine tapered roller bearings ndeyekuvaka kwakasiyana-siyana
● Ichiri kutakura radial load, inogona kutakura bidirectional axial load
● Radial uye axial yakasanganiswa mitoro uye torque mitoro, iyo inonyanya kukwanisa kutakura mikuru yeradial mikuru, inonyanya kushandiswa muzvikamu zvinogadzirisa axial displacement kumativi ose e shaft uye imba.
● Inokodzera maapplication ane yakakwirira rigidity zvinodiwa.Inoshandiswa zvakanyanya kumberi kwevhiri hub yemotokari
Ina-Row Tapered Roller Bearings
● Mitsara mina ine tapered roller bearings ine zvakasiyana-siyana
● Kuiswa kwakareruka nekuda kwezvikamu zvishoma
● Kugoverwa kwemutoro wemina-roller rollers inovandudzwa kuderedza kupera uye kuwedzera hupenyu hwebasa
● Nekuda kwekuderedzwa kwemukati mhete hupamhi kushivirira, iyo axial yekumisikidza pamutsipa roll inorerutswa.
● Huyero hwakafanana nehwemazuva ose ane mitsara mina ine mhete dzepakati.
● Chimiro chemukati che cylindrical roller bearings chinotora roller kuti irongedze zvakafanana, uye spacer retainer kana isolation block yakaiswa pakati pemapumburu, izvo zvinogona kudzivirira kurerekera kwema rollers kana kupesana pakati pe rollers, uye zvinobudirira kudzivirira kuwedzera. ye torque inotenderera.
● Huru hwekutakura mutoro, kunyanya kutakura radial load.
● Yakakura radial inotakura simba, inokodzera mutoro unorema uye inokanganisa mutoro.
● Low friction coefficient, yakakodzera kukurumidza.
● Mutsara mumwechete cylindrical roller inotakura chete neradial simba, kunaka kusimba, kukanganisa kupikisa.
● Inokodzera shafts mapfupi ane zvitsigiro zvakasimba, shafts ane axial displacement inokonzerwa nekushisa kwekushisa, uye midziyo yemuchina ine mabheji anobviswa ekuisa uye disassembly.
● Inonyanya kushandiswa kumota hombe, muchina chidzitiro che spindle, injini yekumberi uye kumashure inotsigira shaft, chitima uye mutakuri wemota axle inotsigira shaft, dizeli injini crankshaft, mota tirakita gearbox, nezvimwe.
Kaviri Row Cylindrical Roller Bearings
●Ine cylindrical mukati megomba uye conical mukati megomba zvimiro zviviri.
● Iine zvakanakira compact chimiro, guru rigidity, yakakura kutakura simba uye diki deformation mushure mekutakura mutoro.
●Inogonawo kugadzirisa kucheneswa zvishoma uye kurerutsa chimiro cheiyo yekumisikidza mudziyo kuitira nyore kuisirwa uye disassembly.
● Mitsara mina ye cylindrical roller bearings ine friction yakaderera uye inokodzera kutenderera kwepamusoro.
● Inonyanya kushandiswa mumichina yekukungurutsa chigayo sechigayo chinotonhora, chigayo chinopisa uye billet mill, nezvimwe.
● Kubata ndeyekuparadzaniswa kwechimiro, kutakura mhete uye zvikamu zvemuviri zvinoputika zvinogona kuparadzaniswa zviri nyore, saka, kuchenesa, kuongorora, kuisa uye disassembly yebheya iri nyore kwazvo.
● Spherical roller bearings vane automatic self-aligning performance
● Pamusoro pekutakura radial mutoro, inogona zvakare kutakura bidirectional axial mutoro, haigone kutakura yakachena axial mutoro.
● Iine simba rakanaka rekudzivirira
● Inokodzera kuisa kukanganisa kana kukanganisa kwe shaft inokonzerwa neAngle kukanganisa zviitiko
● Tsono roller bearing ine hombe kutakura simba
● Low friction coefficient, high transmission performance
● Mutoro mukuru wekutakura
● Chikamu chiduku chemuchinjikwa
● Kukura kwedhayamita yemukati uye simba remutoro zvakafanana nemamwe marudzi emabhengi, uye dhayamita rekunze ndiro diki.
● Hune simba
● Axial mutoro
● Kumhanya kwakaderera
● Unogona kuva nekutsauka
● Kushandisa: maturusi emuchina motokari uye marori emwenje marori, turera nemabhazi pamavhiri maviri nematatu